“फुल टाइमर जोर्नालिष्ट” :: Press Chautari ::
“फुल टाइमर जोर्नालिष्ट”
“प्रस्तुत लेखमा समाबेश हुने व्यक्ति, घटना र सामाग्री सबै सत्य हुन्, कसैको जीवनसँग मिल्न गएमा संयोग हुने छैन ।”
चौधौं शताब्दीमा जन्मिएका क्रिष्टोफर कोलम्बसले फेला पारेको यो अमेरिका । विश्वका प्रायः मानिसहरुको आर्कषण बोकेको यहि अमेरिका । अमेरिका जत्तिकै, सके बढि नै आर्थिक,सामाजिक/प्राविधिक र अन्य धेरै क्षेत्रमा उन्नती गरेका कैयौं देशका मानिसहरु “अमेरिकन लाईफ” देखि ईश्र्या गर्छन भने हामी नेपालीहरुको अमेरिका आर्कषण स्वाभाविक नै हो । किन “अमेरिकन लाईफ” चाहियो र ? अमेरिकामा बसेर “नेपाली लाईफ” जिउन पाए भएन र ?
“अमेरिकामा नेपालीहरु पौने तीन लाखको हाराहारीमा छौं रे ।” कुनै सभामा संस्थाका ठालुहरुले अनुमान गरे । “कहाँ अमेरिकामा नेपाली भाषीहरु कम्तीमा पनि पाँच लाख हुनु पर्छ ”– अर्काे सम्मेलनमा गजक्क परेर बसेका एक अतिथि मुखभरी फिँज काढ्दै हाम्रो जनसंख्या आँकलन गरे । अमेरिकामा लाखौंका संख्यामा नेपालीको बसोबासको लख काट्नेहरु कति छन् कति ? सत्य हो, पछिल्लो समय अमेरिकामा नेपालीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । जसकारण धेरै कुराहरु दिनहुँ जसो बढेको बढै छ । व्यावसायी, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, प्राविधिक, बैज्ञानिक, सञ्चार र अरु थुपै्र पेशाकर्मीहरु दिनदिनै थपिदैछन् ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नेपालीहरुको संख्या अन्य राज्यहरुको तुलनामा बढि छ । बढि यसकारण होइन कि न्यूयोर्कमा स्वातन्त्रको प्रतिमुर्ति लिवर्टी छ । ठुला र अग्ला भवनहरु छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय यहि छ... । धेरै कारण मध्ये यहाँ तपाई हामी जाति, पार्टी, धर्म, बर्ग, क्षेत्र, रंग आदि इत्यादि भएर बाँच्न सक्छौं । जो अन्य राज्यमा कहाँ ?
दुई हप्ता अघि मात्रै न्यूयोर्कमा तीन वटा नयाँ संस्थाहरु आधिकारिक रुपमा दर्ता भए । तीन अध्यक्ष, त्यत्तिकै संख्यामा सकभर बढि उपाध्यक्ष र महासचिवहरु थपिए । सदस्यहरु एैजन एैजन... । अब कुनै कार्यक्रममा तिनले पनि अध्यक्ष भएर खादा ओढ्नेछन् । अतिथिको पगरी गुथ्ने छन् । बाहिर आएका र नआएका सबै जोड्ने हो भने सयको हाराहारीमा नेपाली संघसंस्था न्यूयोर्कमा जन्मिसके । कोहि हुर्की सके, कोहि जन्मिदैछन् । कोहि गर्वमा होलान् । कोहि तुही सके । धेरै राम्रा छन् थोरै चाहि गुमनाम जस्तै । तर अध्यक्ष/सभापति चाहि अभैm छन् है । सिन्को भाँच्न सक्या होइन तर सभा सम्मेलनमा चाहि फलाना संस्थाका अध्यक्ष÷सभापति भनेर सम्बोधन गरिन्छ । मञ्चको अघिल्लो पंक्तिमा गएर गजक्क परेर अतिथि आसन गर्छन् । होइन तिनलाई लाज सरम लाग्दैन भन्या ?
के को लाज र सरम हुनु ? अध्यक्ष खान पाकै छन् । सभा सम्मेलनमा अतिथि सत्कार खाकैछन् । ठुला मान्छे भाकै छन् । अँ...लुगा फाटो लाकै छन् । आखिर गर्नु नै के छ र ? यसैको मोह र लोभको लागि उनले संस्था खोलेका हुन् र अध्यक्ष भएका । बेकार छ कुर्सीका लागि लडाई गर्ने नेपालका नेताहरुलाई गाली गर्नु । उताका नेता त कुर्सी जोगाई राखे मन्त्री, प्रधानमन्त्री सके राष्ट्रपति नै होलान् तर यताकाहरुले “खाई न पाई......लाई” भन्या जस्तै के को अध्यक्ष ? के को महासचिव ? एउटै पदमा जुका टाँसिए जस्तै टाँसिई रहने... ।
अबको पाँच बर्षमा न्यूयोर्कमा मात्रै पाँच सय संघसंस्था स्थापना हुनेछन् । नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको एक सय पच्चिस जातीको जाती पिच्छे संस्था, हालको पचहत्तर जिल्लाको गोटागन्ती संगठन् । एक सय तीस भन्दा बढि राजनीतिक पार्टीका बिदेश विभाग अनि कलाकार, पत्रकार, डाक्टर, वकिल, व्यावसायी, न्यायधिस, विद्यार्थी, खेलाडीहरुको बेग्ला बेग्लै संस्था संगठन । घरैपिच्छे, दोकानै पिच्छे, यत्र तत्र सर्वत्र नेपाली संगठनहरु । यसरी बग्रेल्ती संघ संस्था खोले पछि यहाँका पत्रकारहरुमा व्यस्तता बढ्ने ग्यारेण्टी छ । दिनहुँ जसो कार्यक्रम, चौंबिस घण्टामा पन्द्र वटा घण्टा संघसंस्थाकै कार्यक्रममा बिते पछि के को सेभेन एलाभेन ? के को ग्रोसरीमा घण्टा मार्नु गाँठे ? “फुल टाइमर जोर्नालिस्ट” ।
संघ नै संघ संस्थाका कार्यक्रमहरु भई रहेपछि सुन्ने पनि तिनै, बोल्ने पनि तिनै । अहिले नै फ्लोरमा भन्दा मञ्चमा बढि अतिथिहरुको लस्कर र भीँड हुन थालेको छ । पौने घण्टा बोलेर दुई शब्द अन्त गर्दछु भन्नेहरु मध्येरातमा फोन गरेर खै समाचारमा मैले पनि यसो÷त्यसो भनेको थिए....मेरो नाम छुटेछ ...मेरो फोटो खोई...? यस्ता गुनासा पोख्छन् । यता समाचारको एउटा पोको बिसाउन नपाउदै अन्य कार्यक्रमहरुको लिस्ट, पाँच सात घण्टा मुन्टो ओतेको घरको रेण्ट, फरक फरक अक्षरमा आएको युटिलिटी बिल, श्रीमती, प्रेमिका, घरपरिवार के के जातिको कचकच र टेन्सनले मक्किएको कुर्सीबाट डङरङ्ग लड्छ –“फुल टाइमर जोर्नालिष्ट”।
यसपाली पनि यत्ति ।
मंगलवार, २०७० पुस २९ गते ०८:३४ / Tuesday, Jan 14, 2014 8:34 am